Iindaba-Malunga nokuphuhliswa kwetekhnoloji yecrafti yamandla
Ngophuhliso lwetekhnoloji yokuhluza amandla ombane, itekhnoloji yokuhluza isebenza ngokukuko ekunciphiseni ukuphazamiseka kwe-electromagnetic, ngakumbi kwisiginali ye-EMI yokuhambisa umbane, onokuthi udlale indima enkulu ekuphazanyisweni kokuqhutywa kunye nemitha yokuphazamiseka. Imiqondiso yokuphazamiseka kwendlela eyahlukileyo kunye nemiqondiso yokuphazamiseka kwendlela eqhelekileyo inokumela yonke imiqondiso yokungenelela kunikezelo lwamandla.
Eyokuqala ikakhulu ibhekisa kumqondiso wongenelelo ohanjiswe phakathi kweencingo ezimbini, ezizezophazamiso olulinganayo kwaye zibonakaliswa kukuhamba okuphantsi, ukuphazamiseka okuncinci kunye nokuphazamiseka okuncinci okwenziwe ngombane. Okokugqibela kubhekisa kunikezelo lwemiqondiso yokuphazanyiswa phakathi kocingo kunye nendawo ebiyelweyo (umhlaba), eyeyokungenelela kwe-asymmetric, kwaye ibonakaliswa ngokuhamba rhoqo, ukuphazamiseka okukhulu kokuphazamiseka kunye nokuphazamiseka okukhulu kwe-electromagnetic.
Ngokusekwe kolu hlalutyo lungentla, uphawu lwe-EMI lunokulawulwa ngaphantsi kwenqanaba lomda elichazwe yimigangatho ye-EMI ukufezekisa injongo yokunciphisa uphazamiseko lokuqhuba. Ukongeza kuxinzelelo olusebenzayo lwemithombo yokuphazamiseka, izihluzi ze-EMI ezifakwe kwigalelo kunye nakwiziphumo zesekethe yokuhambisa umbane ikwayindlela ebalulekileyo yokuphelisa ukuphazamiseka kombane. Ukuhamba rhoqo kwezixhobo ze-elektroniki kuhlala kuphakathi kwe-10MHz kunye ne-50MHz. Uninzi lwemigangatho ye-EMC yomgangatho ophantsi wokungenisa umda wokuphazanyiswa kwe-10 MHZ, yokuhambisa isantya esiphezulu sokuhambisa umbane kumqondiso we-EMI, ukuba nje ukhetho lwenethiwekhi lucoca ulwelo lwe-EMI ngokulula okanye ukucoca isekethe yeefriji ye-EMI ilula, ayizukufezekisa kuphela Injongo yokunciphisa ubuninzi be-high-frequency mode-mode yangoku, nayo inokukwanelisa umphumo wokucoca imimiselo ye-EMC.
Umgaqo woyilo lokucoca isinxibelelanisi sombane usekwe kulo mgaqo ungasentla. Kukho ingxaki yokuphazamiseka phakathi kwezixhobo zombane kunye nokuhanjiswa kwamandla kunye naphakathi kwezixhobo ezahlukeneyo zombane, kwaye isixhobo sokucoca umbane sisisombululo esifanelekileyo ukunciphisa uphazamiseko. Kuba isikhonkwane ngasinye sesinxibelelanisi sokucoca sinefilitha yokupasa esezantsi, ipini nganye inokucoca ngokuchanekileyo imowudi eqhelekileyo yangoku. Ukongeza, isihlanganisi sokucoca umbane sinohambelwano olufanelekileyo, ubungakanani bayo kunye nobungakanani bemilo kunye nesihlanganisi sombane esiqhelekileyo ngokufanayo, zinokutshintshwa ngokuthe ngqo.
Ukongeza, ukusetyenziswa kwesinxibelelanisi samandla okucoca ulwelo kukwawo uqoqosho olulungileyo, ikakhulu ngenxa yokuba isixhobo sokucoca amandla esihlunu kufuneka sifakwe kwizibuko lecala elikhuselweyo. Emva kokuba isuse uphazamiseko lwangoku kwintambo, umqhubi akasayi kuphinda awuva umqondiso wokuphazamiseka, ngenxa yoko inentsebenzo ezinzileyo kunentambo ekhuselweyo. Isinxibelelanisi sokucoca umbane asinazo iimfuno eziphakamileyo zonxibelelwano lokuphela kwekhebula, ngenxa yoko akufuneki sisebenzise ikhebula elikhuselweyo elikumgangatho ophezulu konke konke, elibonisa ngakumbi uqoqosho lwalo olungcono.
Ixesha Post: Oct-19-2019